Dowladda Kenya ayaa ka hor timid tallaabada uu Mareykanka ciidamadiisa ugala baxayo Somalia… – Hagaag.com
Dowladda Kenya ayaa ka hor timid tallaabada uu Mareykanka ciidamadiisa ugala baxayo Somalia…
Posted on 17 Oktoobar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Dowladda Kenya ayaa ka hor timid tallaabada Mareykanka uu ciidamadiisa ugala baxayo Soomaaliya.
Wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa waxay sheegtay in tallaabada noocan oo kale ah ay u badan tahay inay khatar gelinayso qorshaha amni ee lagula dagaallamayo argagixisada iyo horumarinta ujeeddada guud ee bulshada caalamka.
Xoghayaha guud ee arrimaha dibadda, Kamau Macharia ayaa sheegay in Kenya ay mudooyinkii la soo dhaafay la kulmaysay dib u dhac dhaqaale kadib weeraradii kooxda Alshabaab ka geysatay dalkeeda, oo ay ku jiraan weeraradii Westgate Mall, Dusit 2 Hotel iyo kuwo kale.
Hadalka Macharia ayaa imaanaya kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu ku wargaliyay la taliyayaashiisa sare inuu doonayo inuu ciidamada Mareykanka kala baxo Soomaaliya.
Qoraal uu daabacay Bloomberg ayaa lagu sheegay in tani ay u oggolaan doonto Trump inuu ka dhabeeyo ballanqaadyadii ololaha ee ahaa inuu askarta dalkooda keenayo in kasta oo Soomaaliya ay weli ku sugan tahay khatar weyn oo kaga imaaneysa Alshabab iyo Daacish.
Mareykanka waxaa Soomaaliya ka jooga 650 ilaa 800 oo askari, sida laga soo xigtay Taliska Mareykanka ee Afrika, waxaa ku jira saraakiil gacan ka geysanaya tababarka ciidamada Soomaaliya.